अमेरिका र इरान युद्धको तयारीमा लागेकै हुन त ? - Samaya Sandarva
अमेरिका र इरान युद्धको तयारीमा लागेकै हुन त ?
मंगलवार, बैशाख २४, २०७६ ०९:३२ - समय सन्दर्भ
अमेरिकाले मध्य–पूर्वमा आफ्नो एउटा युद्धपोत तैनाथ गरेको छ। इरानलाई एउटा ‘स्पष्ट र सिधा’ सन्देश दिन अमेरिकाले यसो गरेको हो। अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जान बोल्टनले भने-‘ट्रम्प प्रशासनले यो निर्णय दुख दिने र उक्साउन संकेत गर्ने र चेतावनी दिनेको जवाफमा लिएको हो।’
एक अमेरिकी अधिकारी जोन बोल्टनले बताए अनुसार इरानमा रहेका अमेरिकी सुरक्षा बलको मुख्यालयमा आक्रमणको आशंका गरिँदै आएको थियो र त्यही कारण अमेरिकाले यो कमद उठाएको हो। जोन बोल्टनले कुनै पनि प्रकारको आक्रमणको जवाफ गतिलेसँग दिने बताएका छन्।
बोल्टनले भने, ‘ अमेरिका यूएसएस अब्राहम लिंकन क्यारियर स्ट्राइक ग्रुप र एउटा बन्बर टास्क फोर्सलाई अमेरिकाको ‘सेन्ट्रल कमाण्ड’ क्षेत्रमा पठाउँदैछ। हामी यस्ता इरानी शासनलाई एउटा स्पष्ट र सिधा सन्देश दिनकालागि गरिरहेका छौं। सन्देश के हो भने यदि अमेरिका या उसका सहयोगीमाथि कुनै पनि प्रकारको आक्रमण भयो भने त्यसको गतिले जवाफ दिनेछौ।’
बोल्टनले थपे – ‘अमेरिका इरानसँग युद्ध गर्न चाहँदैन। तर हामी कुनै पनि प्रकारको आक्रमणको जवाफ दिन पूरै तयार छौं। चाहे यो इस्लामिक स्टेट रिभोल्यूशनरी गार्ड्स या इरानी सेनाले सुरु गरेको छद्म युद्ध किन नहोस्।’
यसअघि अमेरिकाले इरानको एलीट रिभोल्यूशनरी गार्डलाई ‘विदेशी आतंकवादी संगठन’ भनि सकेको छ।
उत्तर कोरियाले गर्‍यो एउटा ‘‘अत्यन्तै महत्वपूर्ण परीक्षण’’: केसीएनए
हैदराबाद बलात्कार र हत्या केसका ४ मुख्य आरोपीहरूको इन्काउन्टर
माल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनलाई जेल सजाय